एप्पलले एक एकीकृत प्रोसेसरको साथ बाह्य प्रदर्शन विकास गर्दैछ म म्याकबाट हुँ
टोनी कोर्टेस | 24/07/2021 20:00 | अफवाहहरु
एप्पल नयाँ बाह्य प्रदर्शन प्रकारमा काम गर्दैछ एकीकृत प्रोसेसरको साथ प्रो प्रदर्शन XDR। तपाईंको जडित म्याकलाई ग्राफिक्स गणनाबाट खाली गर्नका लागि एक उत्तम विचार। यसको मतलब यो हो कि साधारण म्याक मिनीमा जडान भएको, तपाईंसँग छविहरू र भिडियो सम्पादन गर्न, वा गेमि forको लागि शक्तिशाली वर्कस्टेशन हुनेछ।
समस्या मूल्य मा आउँछ। यदि एप्पल बाट बाह्य स्क्रीन पहिले नै भाग्य लायक छ, म यो एकीकृत प्रोसेसर र न्यूरल इञ्जिनको साथ के भन्न खर्च हुनेछ भनेर सोच्न चाहन्न। हामी विचार गर्ने छौँ…
एप्पल प्रो प्रदर्शन XDR बाह्य प्रदर्शन धेरै समय को लागी आएको छ, तर छोटो अवधिमा अपडेट गरिएको संस्करणको बारेमा कुनै हल्ला छैन। तर यो जान्न सकिन्छ कि एप्पल आन्तरिक रूपमा एक बाह्य नयाँ प्रदर्शन परीक्षण गर्दैछ A13 प्रोसेसर समर्पित र संग पनि न्यूरल ईन्जिन.
नयाँ प्रदर्शन कोडनेम अन्तर्गत विकसित भइरहेको छ J327, तर यस बिन्दुमा, टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको विवरणहरू रहस्य हो। यस्तो देखिन्छ कि यस स्क्रिनमा एप्पलले बनाएको SoC पाउनेछ, जुन अहिले ए १13 बायोनिक चिप हो, आईफोन ११ लाइनमा प्रयोग गरिएको उही।
A13 चिपको साथमा, बाह्य प्रदर्शनले न्यूरल ईन्जिनको सुविधा दिन्छ, जसले शिक्षा कार्यहरू स्वचालित रूपमा गति गर्दछ। समर्पित SoC संग यस्तो बाह्य प्रदर्शन हालको एक बदल्नको लागि एक नयाँ मोडेल हुन सक्छ प्रो प्रदर्शन XDR.
यो पक्कै राम्रो विचार हो। एक छ एकीकृत CPU / GPU बाह्य प्रदर्शन मा म्याकले म्याकको आन्तरिक प्रोसेसरको सबै स्रोतहरू प्रयोग नगरी उच्च रिजोलुसन ग्राफिक्स प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
एप्पल म्याकको प्रोसेसरको साथ प्रदर्शन SoC को शक्ति संयोजन गर्न सक्दछ धेरै ग्राफिक गहन कार्यहरू चलाउनको लागि अझ बढी प्रदर्शन प्रदान गर्न। अर्को सम्भावना प्रो प्रदर्शन XDR मा केहि स्मार्ट सुविधाहरू जोड्नको लागि यो SoC प्रयोग गर्नु हो AirPlay.
यो योजना कसरी प्रगत हुँदैछ, र यदि अज्ञात छ चाँडै जारी हुनेछ बिक्रीको लागि वा यो अझै तयार समयको लागि समय हो। हामी नयाँ अफवाहहरुमा ध्यान दिनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » अफवाहहरु » एप्पलले एकीकृत A13 प्रोसेसरको साथ बाह्य प्रदर्शन विकास गर्दैछ
एप्पल जर्मनी, स्टूडियो बुड, र अधिकबाट दान। म्याकबाट मा हप्ताको सर्वश्रेष्ठ